arimaha diinta Archives -
August 26, 2018 M.Jo 0
Mudo lix sano ah ayaa ka soo wareegatay markey is guursadeen Axmed iyo Maryam, wax caruur ah iskuma aysan dhalin, habeen habeenada kamid ah ayagoo is ag jiifa ayey sheekeysteen, waxay is weydiiyeen ayagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmu u heli la’yihiin, sheekadii ayaa ka dheer dheeratay waxayna isku badashay buuq, ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey inay dhaqtar barri u tagaan si ay u ogaadeen dhibka dhanka uu kajiro. Ayagoo qofna u sheegin ayey subixii dhaqtarkii aadeen, baaritaankii kadib Axmed ayaa wuxuu u soo galay dhaqtarkii si uu natiijada baaritaanka ugu sheego, dhatarkii wuxuu Axmed tusay natiijadii baaritaanka; taas oo aheyd inuu Axmed caamaad ahaan Fican yahay balse ay Maryam qabto xanuun islamarkaana aysan suurto gal aheyn inay uur qaado, sida uu dhaqtarku sheegay, wuxuuna intaa ku daray in aan rajo laga qabin inay ka bogsato xanuunkaas. Axmed markii uu natiijada arkay wuu murugooday, saas ay tahay hadana wuxuu ku shukriyey Allaah. Dhaqatarkii ayuu u sheegay inuu xaaskiisa u wacayo si ay gudaha u soo gasho, laakiin wuxuu ka codsay inuu dhaqtarku u sheego Maryam in aysan wax xanuun ah qabin dhibkana uu yahay dhankiisa. Dhaqtarkii [Sii aqri]
Mario Balotelli oo si Kaftan ah ugu jawaabay Taageere Weydiiyay Sababta uusan Ugu Soo Biirayn Napoli
August 9, 2018 F.G 0
Mario Balotelli ayaa boggiisa Instagram ugu jawaabay taageere, kaas oo waydiiyay sababta uusan ugu soo biirayn Napoli, maadaama lala xiriirinayay xagaagan in uu isaga dhaqaaqayo kooxdiisa Nice. Balotelli oo kamid ah xidigaha aan lagaban hadalka ayaa taageerihii waydiiyay suaashaas si layaab leh ugu sheegay in uu dib u waydiiyo suaaashan oo kale madaxwaynaha kooxda Napoli ninka lagu magacaabo Aurelio De Lauretiis. “Waxa aan u malaynayaaa in uu igaga habboon yahay in aad waydiiso suaashan madaxwanahaaga (De Laurentiis).” Balotelli ayaa lagu xasuustaa waqtiyadii uu lasoo qaatay qaar kamid ah kooxaha ugu waawayn qaaradda yurub sida, AC Milan, Liverpool iyo Mancchester City oo uu kula guulastay Premier League.
Cayaartooy u dhalatay Cameroon oo ka goostay xulkooda xilli ay joogeen Australia
April 11, 2018 F.G 0
Siddeed cayaartooy oo dalka Cameroon uga qaybgalaysay cayaaraha ururka dalalka barwaaqo-sooranka ee ka socda dalka Australia ayaa la sheegay in la waayay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha kooxda. U qeybsanaha warbaahinta Simon Molombe ayaa BBC-da u sheegay in saraakiisha cayaaraha dalka Cameroon ay u arkaan ‘dad la waayay meel ay aadeen” ayna ku wargeliyeen booliska waddanka Australia. Saddex cayaartooy oo ah kuwo miisaanka culus qaada iyo shan feeryahan ayaa la sheegay in markii araggooda dad ugu war dambaysay ay ahayd isniinti iyo taladadii. Dowladda Cameroon waxay sheegtay in kooxda cayaartooyda uu fiisahoodu shaqaynaayo illa 15 bisha May. Malombe ayaa waxaa uu sido kale sheegay inay ka walaacsan yihiin maqnaanshaha cayaartooyda islamarkaana sheegay in qaarkood aysan tartamin. Waxaa uu intaasi ku daray inay ku rajo wayn yihiin inay kusoo laaban doonan xaafadahooda ayna lasoo safri doonaan kooxda kale. Dowladda Australia ayaa u digtay cayaartooyda inay iskala sii haraan fiisahooda marka uu wakhtiga ka dhaco. Ururka maamulo cayaaraha barwaaqo-sooranka ayaa waxay sheegeen inay dusha kala socon doonaan xaaladda cayaartooyda oo ay sheegeen ‘inay xaq u leeyihiin inay ku [Sii aqri]
April 2, 2018 F.G 0
Waxaan hawada kuu soo marinayaa salaan ka soo go’day kashka iyo laabta, salaan kaddib. Waxaan kuu rajeynayaa caafimaad qab cimri dheer iyo cibaaddo suubban. Gacaliye waxaan rabaa in aan kuu sheego arrin muhiim ah, maalintaan is baranay iyo maalinkaan la joogo ma jiro qof aan dunida kugu doorsanaayo haddaan adiga ku waayana nin kaa danbeeyo ma guursan doono ma dhici doonto, nolosha waa macaan iyo qaraar meel ku wada yaal waana harka labadiisa galin, anaga haddaan bini-Aadam nahay waan iska tashaneynaa tii Rabbi waa gooni, kaddib markii aan dhib iyo rafaad aan ku billaabanay aayaha mustaqbalkiina, haddana muddo aan yareyn laga joogo oo ku dhaw hal sanno wax ka dhiman ayaaba iska yar waxaan qaatay go’aan kama danbeys ah waxaan kaa filayaa inaad iga ogolaan doonto. Ka hor inta aan kuu sheegin go’aanka aan qaatay waxaan rabaa in aan ku yara xasuusiyo waayihii macaanaa ee na soo maray iyo sidii aan isku baranay, iyo rajadii aan ka qabnay mustaqbalka reerkeena iyo sida uu hal hal habeen u noqday gudcur lama daggaan ah waase iska xaal [Sii aqri]
June 24, 2017 F.G 0
Qiso Cajiib ah oo dhex martay Cumar Binu Khadaab iyo Qoys iska dhibanaa Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu Amiirkii Muslimiita ee wakhtigaas, Cumar Ibn Khattab (ilaahay ha ka raali noqdee) oo dhex qaadayay xaafadaha Madinal Munawarrah si uu ogaado dareenka iyo dhibtaada dadkiisa. Kadib wuxuu maqlay oohin, markaas ayuu ku leexday gurigii ay kasoo baxaysay oohinta. Markaas ayuu arkay haweenay iyo caruurteeda oo oynaya, iyo digsi dabka saran. Kadib ayuu haweenaydii waydiiyay waxa keenay oohinta caruurta. Gaajo inay hayso ayay u sheegtay Amiirka. Hadaba digsiga maxaa saaran ayuu waydiiyay. Biyo caruurta lagu sasabo ayaa saaran ayay ugu jawaabtay. Maysan garan inuu ninka la hadlayo yahay Cumar. Kadib ayay bilowday inay eed dusha uga tuurto Amirka Muslimiinta Cumar ayada oo ku eedaysay inuu iska indhatiray dhibka haysta iyada iyo caruurteeda. Cumar oonan wali isu sheegin ayaa markaa waydiiyay waxa uu u qaban karo asaga oo markaas ilin badan ka qubanayso. Haweenaydii ayaa u sheegtay inay waajib tahay inuu ogaado dareenka ummadiisa maadaamo uu yahay Amiirkooda. Cumar (rc) oo u la socdo gacan [Sii aqri]
FIIRSO:Duruusta Ramadaanka Shiiq Maxamuud Ow Cabdulle Cariif Qaybtii 20aad
June 15, 2017 F.G 0
Qiso Dhab ah “Weligaa Cidna Ha Dulmin “
May 10, 2017 F.G 0
February 26, 2017 F.G 0
Mufti Ismail Menk ayaa ka sheekeynayay qiso yar oo ka dhacday Mareykanka. Nin Muslim ah ayaa wiish uu saarnaa waxaa la soo gashay haweenay Cadaan ah oo qeybo badan oo jirkeeda ah qaawan (aan asturnayn). Ninki hoos buu eegayay, hal marna dhinaceedi ma fiirin. Aad bay uga xanaaqday arrintan, waa marki ugu horeysay nolosheeda oo aan qof eegeyn. Waxay sameynaysay shanqar iyo dhaqdhaqaaq si ay u soo jeediso balse hal marna xageeda ma eegin.Labadooda keliya ayaana ku wada jira meesha. Waxay aaminsaneyd in nin kasta ku qasban yahay in uu soo eego ama la hadlo, waxay nafteeda u diyaarin jirtay in ay rag badan soo jiidato. Filan waa bay ku ahayd xaalka ninkan aan hal marna dhinaceeda eegin. Marki wiishki istaagay oo uu baxay ayay ka soo daba baxday. Waxay ku tiri, “Hey, ma wax baa iga qaldan? Xagee la’ahay? Maxay tahay sababta aad ii eegi weyday?” Wuxuu ugu jawaabay, Walaasheydi, waan ku ixtiraamayaa runtii, waxaan ahay nin Muslim ah, waxaa la i faray inaan indhaheyga laabto. Waxaan ahay nin Xaas leh mana aha inaan [Sii aqri]
February 1, 2017 F.G 0
Waxaa Jiran Nin Boqor caadil ah waxaa uu dhalay Hal wiil Oo keliya, boqorkaas oo jeclaa in in uu Wiilkiisa dhaxlo oo si marka uu dhaxlo sumcadiisa aan loo Dhihin Aabbihii ayaa Ka Wabaagsanaa , balse la yiraahdo waddadii aabbihii buu Maray Oo Nin Wanaagsan Sidii abihiis Oo kale , si taasi ay u dhacdo boqorkii wuxuu u diray Wiilkiisis nin Caaqil ah ah si uu wax u So Baro Ninkii Caaqilka ahaa Wiilkii si fiican ayuu u soo dhaweeyey, isaga oo aad uga dhisay dhinaca aqoonta Ka dibna Maalintii ugu dambaysay ee ay wada kulmaan Wiilkii boqorku dhalay iyo Ninki Caaqilka ahaa ee ugu Yimid Waxbarshada , Kadib waxa dhacday maalintaasi inuu si sabab la’aan uu aad u Garaaco Oo waliba si ba”an u Canaanto Wiilkii Boqorka Dhalay oo aad uga xumaaday sabab la’aanta loo garaacay ayaalOOGU Sii Daray iga Dhaaqaaji wajigayga Wilkii Boqorka ayaa ku laabtay qasrigii Aabahii Kadibna waxba uuma sheegin Aabahii oo wuxuu ka baqay aabahii inuu rumaysan waayo Arinka Lagu Sameeyay muddo dheer kadib, waxa dhintay boqorkii oo waxaa dhaxlay Wiilkiisii kadib inankii [Sii aqri]
Qiso Dhab Ah Oo ilimada ayay indhaha ku Soo joogsdeen ” Wiil Aabihiis Ka Diiday Inu La Heshiiyo
January 16, 2017 F.G 0